Cudurka Daacuunka: Sidee Xal Waara Loogu Heli Karaa Ka Hortagiisa?Dr. Yasin Abdi | Lughaya.Com
Cudurka Daacuunka: Sidee Xal Waara Loogu Heli Karaa Ka Hortagiisa?Dr. Yasin Abdi
Meelo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo goobaha abaaruhu ku habsadeen ayaa la soo sheegayaa inuu ka dillaacay cudurka Daacuunku dhowaan. Aagagga qaarkood waxa la xaqiijiyey in dad ugu geeriyoodeen gaar ahaan goobo ka mid ah gobolka Bay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa adduunka u sheegtay in cudurka Daacuunka lagu arkay Koonfurta Soomaaliya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha (Xinhua) 4tii bisha Maarso 2017 iyo qoraal kale oo ay dhowaan baahisay Outbreaknewstoday.com. Tvga Aljazeera ayaa toddobaadkii hore sii daayey warbixin ka hadlaysa halista cudurka Daacuunku ku hayo dalka Soomaaliya. Halkan hoose riix si aad u akhrisatid/daawatid wararkaas. http://outbreaknewstoday.com/somalia-reports-4000-cholera-cases-since-beginning-year-24135/ http://www.aljazeera.com/video/news/2017/03/somalia-faces-major-cholera-outbreak-170329054056580.html
Vibrio cholera, waxa soore (host) u ah dadka oo keliya lagamana helo xayawaannada kale ee aan dadka ahayn. Bakteeriyadani marka ay soo gasho jidhka dadka, Jidhka ma ay abbaarto (attack/invasive) oo dhismaha mindhicirka yar waxba uma geysato.
Waxay soo saartaa ama sii daysaa mariid (toxin) la yidhaahdo sunta mindhicirada (enterotoxin) taas oo sababta in ay mindhicirka maroojiso oo si xad-dhaaf ah dareeruhu ama hoorku (fluids) iyo cusbada (salts/electrolytes) qofka uga baxaan ka dib marka uu shubmo oo fuuqbaxo.
3. Gastroenteritis (bacterial)
4. Gastroenteritis (viral)
7. Nosocomial diarrhoea
1. Shuban daran oo biyaha bariiska oo kale ah (rice water diarrhoea) isla markaana waxba la socon oo saafi ah.
2. Ubucda (abdominal) oo la maroojiyo xanuunna laga dareemo.
3. Matag ama hunqaaco shubanka ka dib (mararka qaarkood matagga ayaa ka soo horreeya shubanka).
4. Xummad mararka qaarkood (inta badan heerkulku hoos buu u dhacaa).
5. Harraad aad ah
6. Muruqyada ubucda iyo meelaha kale ee jidhka oo aad loo maroojiyo isla markaana xanuuna.
7. Xabeeb ay sabab u tahay fuuq-baxu oo qofka dhuuntu qallasho
8. Qofka oo yare dareema qabow iskuna soo koga
9. Jidhka qofka oo isku duma oo aad u tabaryaraada indhaha iyo daamanka oo godka gala.
10. Heerka garaaca wadnaha (pulse rate) oo daciif ah, dhakhso/deg-deg ah oo an mararka qaarkood la dareemi karin si loo cabbiro.
11. Cadaadiska dhiigga (blood pressure) oo hoos u dhaca oo aan la cabbiri karin.
12. Neefsashada oo si dhakhso/degdeg ah qofka uga soo baxaysa
13. Ogsijiinyaraan (cyanosis) oo jidhku/maqaarku isu bedello midabka buluugga.
14. Kaadida oo yaraata mararka qaarkoodna aan qofka ka iman.
Sidaas darteed, Vibrio cholerae waxay asiibtaa oo waxyeellaysaa oo keli ah shaqada mindhicirka yar oo ay ku sii dayso mareedyadeeda (cholera toxin). Taas oo khalkhal
gelisa habka huleelka (transport) ee biyaha iyo macdanta jidhka (water and salt). Waana ta keenta mararka qaarkood in haddaan bukaanka la daaweyn, waxa laga yaabaa inuu qofku shubmo oo ay ka baxaan ilaa 30 litir oo biyo/shuban ah 24 saacadood gudahood.
1. Haddii degaanka nadaafaddiisu aad u xun tahay waxa suurtogal ah in Daacuunku si fudud loo qaadi karo una fidi karo (Poor sanitation).
2. Haddii magaalooyinku ayan lahayn marinno ay maraan qashinka iyo biyuhu, bakteeriyada cudurka keentaa way helayaan xaaladihii ay ku noolaan lahaayeen kuna kori lahaayeen (Lack of sewage and drainage system).
3. Haddii meelaha qashinka lagu ururiyo waajibaadkooda la marin waayo oo jeermisku ka helaan xaaladihii ay ku dhalan lahaayeen, waxa hawl yaraanaysa gudbinta cudurka (Improper waste management system).
a. Astaamaha iyo calaamadaha cudurka Daacuunka ee aan soo sheegnay oo lagu arko qofka qaba (clinical diagnosis).
b. Waxa kale oo lagu ogaan (xaqiijin) karaa baadhitaanka shaybaadhka caafimaadka (laboratory diagnosis) oo xaqiijiya jiritaanka cudurka, marka laga baadho muunadaha ama saamiga (samples) qofka buka laga soo qaado taas oo lagu ogaado marka lagu sameeyo beerid ama abuurid (culture). Waxa kale oo la adeegsada mararka qaarkood qalabka molecular biolojiga noocyadiisa ay ka mid yihiin PCR iyo DNA probes kuwaas oo lagu ogaado noocyada (strains) Vibrio cholerae ee sababa safmarka. Tusaale ahaan inay tahay Vibrio cholerae 01, 0139 ama Vibrio cholerae El Tor.
Xanuunka heerkiisa waxa lagu qiyaasi karaa inta jeer iyo qiyaasta ama mugga shubanka (diarrhoea), taas oo noqon karta shuban sahlan/khafiif ah (mild diarrhoea), shuban dhexdhexaad ah (moderate diarrhoea) iyo shuban daran/xoog leh (severe
diarrhoea). Sifooyinkaasi waxay tilmaamaan inta fuuqbuxu le’eg yahay kuwaas oo sahlaya sidii loo qorshayn lahaa daaweynta iyo badbaadinta bukaanka.
1. In la daweeyo lagana hortago fuuqbaxa iyo shooga si bukaanka loo badbaadiyo. Taas oo ah in sida ugu habboon ee saxda ah bukaanka loogu sameeyo fuuqcelis si jidhkiisa loogu soo celiyo biyihii iyo macdantii ka baxday (water and salt).
2. In haddii loo baahdo ama ay noqoto lagama maarmaan la daweeyo cudurka laftiisa oo la isticmaalo noole dilayaasha (antibiotics) si loo dabar gooyo inaan bakteeriyadu ku korin kuna tarmin mindhicirka oo aan cudurku u sii fidin.
3. In laga daaweeyo bukaanka calaamadaha iyo waxyaabaha kale ee uu ka cabanaayo oo daryeel wanaagsan loo fidiyo bukaanka.
1. Waa in mudnaanta koowaad la siiyo sidii loo yarayn lahaa dhimashada dadka isla markaana loo daaweyn lahaa bukaanka.
2. Waa in lagu dedaalo sidii loo ogaan lahaa sidee cudurka Daacuunku ku bilaabmay, meeshee ka bilaabmay iyo sidee ku faafay si loo qorsheeyo hababka saxda ah ee lagu xakamayn karo Daacuunka.
3. Waa in biyaha la cabbo si hagaagsan loo daaweeyo oo nadaafadooda la ilaaliyo si dadku u helaan biyo nadiif ah.
4. Waa in biyaha la cabbo la iska kariyo intaan la cabbin ka hor meelaha aan lahayn biyaha nadiifta ah ee qasabada biyaha.
5. Waa in cuntada aad laysaga kariyo lagana fogaadaa cuntooyinka iyo cabbitaanka lagu gado meelaha debedda ah ee ku taxan waddooyinka hareerahooda.
6. Waa in dadka bukaanka daryeela si fiican isu nadiifiyaan oo saabuun iwm ku faraxashaan.
7. Waa in saxarada iyo waxyaabaha kale ee sadhaysan si hagaagsan loo maamulo oo meel ku haboon lagu shubo isla markaana lagu qubo si aan fidista cudurku u sii socon (proper waste management system).
8. Waa in sare loo qaadaa nadaafadda shakhsiga si looga hortago gudbinta cudurka Daacuunka bulshada dhexdeeda.
9. Waa in dadka socotada ah ee ka yimaadda degaannada lagu tuhunsan yahay cudurka Daacuunka isha lagu hayo xaaladdooda caafimaad inay wax iskabeddeleen iyo in kale. Mararka qaarkood haddii aad looga baqo inay bukaan, waa la karantiimayaa (Quarantine).
10. Waa in tababar ku saabsan saxadhowrka, nadaafadda iyo maaraynta cuntadu inay tahay tallaabo muhiima xagga ka hortagga cudurka loo fidiyo wadhatada jidadka cuntada ku iibiya (street vendors) iyo guud ahaan shaqaalaha ka shaqeeya meelaha cuntada sida makhaayadaha, hudheellada iwm.
11. Waa in la bixiyaa tallaalka Daacuunka waqtiga safmarka si dadka looga samata bixiyo cudurka Daacuunka intaanu ku dhicin ka hor.
12. Waa in bulshada lagu waaniyo inay isticmaalaan cuntooyinka ashitada ama asiidhka leh (acidifying foods) sida liinta noocyadeeda kala duwan, yaanyada ama tamaandhada, tamariinta, ciirta ama caanaha gadhoodhka/garoorka ah (yoghurt) iwm. Cuntooyinka ashitada lehi waxay ka hortagaan oo yareeyaan V.cholerae sababtoo ah asiidka cuntada iyo caloosha ayay bakteeriyadu u nugushahay.
Sidaan wada ognahay cudurka Daacuunku, inta badan waa ku soo noqnoqdaa geyiga Soomaalida. Sidaas darteed, waxa loo baahan yahay in laga gaashaanto oo laga hortago dhibaatada caafimaad iyo waxyeellada kale ee bulshada Soomaaliyeed ka soo gaadha goor walba. Waxa lama huraan ah, in la sameeyo qorsheyaal iyo
istaraatijiyad leh tallaabooyin la taaban karo oo la dhaqan gelin karo muddada gaaban (short-term) iyo muddada fog (long term).
1. In daraasad iyo sahamis lagu sameeyo waddanka si loo ogaado sidee cudurka Daacuunku u bilaabmay, halkee ka bilaabmay iyo sidee ku faafay si loo qorsheeyo hababka saxda ah ee lagu xakamayn karo Daacuunka.
2. In la dejiyo barnaamajka xakamaynta iyo ka hortagga cudurka Daacuunka iyadoo la adeegsanayo tabaha ugu haboon.
3. In la bilaabo olole wacyigelin ah si bulshadu u ogaadaan caafimaad darrada ka iman karta Daacuunka.
4. In lagu dedaalo sidii loo yarayn laha safarka loo socdaalayo meelaha la sheegay in cudurku ka dillaacay si aan cudurku u sii gudbin ama u gaadhin gobollada kale.
5. In laga war hayo goobaha dadku Daacuunka ugu dhinteen si loo ogaado xaaladda guud ee degaamadaas isla markaana laga kaalmeeyo wixi dhibaato ah ee ka soo gaadhay cudurka Daacuunka.
6. In la diiwaangeliyo dadka la ogaaday inuu ku dhacay cudurka Daacuunku si loo ogaado tiro koobka iyo dadka u geeriyooday Daacuunka.
Sida ay sheegtay WHO, dhulka Soomaalida, boqolkiiba in ka yar 23% (<23%) ayaa hela biyo nadiif ah. Haddii biyo nadiif ah la helo waxa xal waara loo helayaa in ka badan boqolkiiba 90% (>90%) dhibaatada cudurada faafa oo ah kuwa ugu badan geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Sida laga soo xigtay WHO, boqolkiiba 63-69% waxa Afrika dadku u dhintaan cudurada faafa (infectious diseases). http://www.saxadoon.com/empfound/infectious-diseases-are-the-first-leading-cause-of-death-in-the-africa-what-can-we-do/
1. In la sameeyo oo la abaabulo maamul isku dhaf ah oo ay iska kaashadaan laamaha maamulka dawliga ah isla markaana laga qayb geliyo bulshada ujeedadiisuna tahay sidii looga hortagi lahaa Daacuunka iyo cudurada kale ee faafa muddada gaaban iyo ta fogba.
2. In bulshada lagu wargeliyo istaraatijiyada iyo tabaha lagu yaraynaayo Daaccunka iwm, meelaha muhiimka ah ee laga abbaaraayo iyo waxyaabaha u fududeeya gudbinta cudurkan si wacyigelintaasu u suurtogeliso in dadweynuhuna dhinacooda ka qayb qaataan barnaamajka xakamaynta Daacuunka.
3. in la hagaajiyo nadaafada iyo saxada bulshada (Good sanitation)
4. In la habeeyo qashinka (garbage) oo si ku habboon loo tuuro, meelo loogu talogalayna lagu ururiyo aakhirkana si hagaagsan loo gubo (Proper waste disposal system).
5. In hannaanka musqulaha iyo meelaha dadku ku saxaroodaan laga ilaaliyo inay ku darsamaan meelaha biyaha lagu kaydiyo iyo ceelasha biyaha laga cabbo (Proper sewage and drainage system).
6. In kor loo qaado dhaqanka nadaafad wanaagga sida gacmaha oo la iska maydho marka la isticmaalo musqusha/suuliga iyo ka hor intaan la diyaarin cuntada (Improved hygiene practice).
7. In la horumariyo waxbarashada beesha dhinaca caafimaadka (community health education) si kor loogu qaado wacyigooda caafimaadka dadweynaha si ay uga qayb qaataan ka hortagga iyo xakamaynta cudurada faafa sida Daacuunka iwm (Community health education programmes).
8. In lagu dheerigeliyo bulshada siiba degaamada uu ka dhici karo safmarka Daacuunku inay isticmaalaan waxyaabaha yarayn kara waxyeelada iyo fidista Daacuunka sida ku darista dheecaanka liita (lime juice) biyaha iyo cuntada.
9. In barnaamajyada wacyigelinta caafimaadka dadweynaha (public health) laga sii daayo idaacadaha, TVyada iyo warbaahinta baraha bulshada (social media).
10. In joogto laga dhigo wacyigelinta caafimaadka siiba xilliyada ay dillaaci karaan cudurada faafa gaar ahaan xilliga roobka iyo waqtiyada abaaraha si looga hortago cudurada.
11. In dalka laga hirgeliyo shaybaadhka caafimaadka guud ee cudurada faafa iyo saxadhowrka (Public health microbiology laboratory) kaas oo suurta gelinaya baadhitaanka cudurada (infections) iyo ka hortagooda.